प्रथम राष्ट्रपतिको प्रश्नः प्रधानन्यायाधीशलाई कस्को तागत ? « रिपोर्टर्स नेपाल
प्रथम राष्ट्रपतिको प्रश्नः प्रधानन्यायाधीशलाई कस्को तागत ?
काठमाडौं, १४ कात्तिक । प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई कुनै शक्ति केन्द्रको साथ मिलेको आशंका व्यक्त गरेका छन् । उनले नाम नखुलाई कसै न कसैको तागतमा प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायाधीश, नेपाल बार, कानुनविदहरु एक ठाउँमा रहेर राजीनामा माग्दा पनि नटेरेको टिप्पणी गरेका छन् ।
‘न्यायालका सारा न्यायाधीश, बुद्धिजीवि, संविधानविदहरु एकातिर छन् । यस्तो अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश छाड्दिन भन्छन् । एक्लै बेन्चमा बस्छन् । प्रधानन्यायाधीशलाई कस्को तागत ?’ यादवले राजधानीमा पुस्तक विमोचनमा प्रश्न गरे ।
न्यायालयमा ठूलो संकट आएर समस्या भइरहँदा प्रधानन्यायाधीश शेरबहादुर देउवा बेलायत भ्रमणमा निस्किएको भन्दै आलोचना गरे । देशमा समस्या भइरहँदा देउवा बेलायत गएर देशको शीर निहुराएको टिप्पणी गरे ।
यादवले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भूमिकाको पनि आलोचना गरे । उनले एउटै मञ्चबाट राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको खुलेर आलोचना गरे । तस्विर : मुकुन्द कालिकोटे, रिपोर्टर्स नेपाल डटकम